Wasiirka arrimaha dibadda: “Soomaaliya ma aha meel dambiilayaashu ku soo ordain” – Radio Muqdisho
Wasiirka arrimaha dibadda: “Soomaaliya ma aha meel dambiilayaashu ku soo ordain”
Dowladda Federaalka ayaa sheegtay in Soomaaliya aysan noqon doonin meel ay ku dhuuntaan argagixisada islamarkaana la soo qaban doono qof kastoo dambiila ah.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr. C/salaan Hadliye ayaa sheegay in dowladda ay la socoto duqeymaha lagu qaarijinayo horjoogayaasha Shabaab, wuxuuna intaa ku daray in dowladaha caalamka iyo dowladda Federaalka Soomaaliya ay sii wadayaan iskaashiga ku wajahan sidii loo bartilmaameedsan lahaa horjoogayaasha dambiga ka galay ummadda ee haddana ku dhuumaaleysanaya dalkeena.
“Waxaan kala soconaa waxaa weeye inaan ummadda adduunka iyo dadka Soomaalida ah u sheegno ineysan Soomaaliya noqon Karin meel lagu dhuunto, qofkii dambi galana la soo qaban doono, marka Soomaaliya ma aha meel dambiilayaashu ku soo ordain” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda C/salaam Hadliye.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in Soomaaliya uu ka socdo isbedel dhinac kasta ah, dowladduna ay dhul weyn gacanta ku heyso, sidaasi darteedna aysan suurtagal aheyn in Soomaaliya ay ku dhuuntaan dammbiilayaasha.
Hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli ay sii kordheyso horjoogayaasha argagixisada ee lagu dilayo gudaha dalkeena, iyadoo horjooge lagu magacaabo Aadan Garaag dhawaan diyaaraha Mareykanku ku dileen deegaan u dhaxeeya Diinsoor iyo Baardheere.
Guddoomiye “Muungaab” oo kormeeray xarunta Dab damiska “Sawirro”